Ọkwọ ụgbọala na-adịghị mma Led High Bay Light, Led High Bay Light Fit, Led High Bay Lighting Manufacturers and Suppliers in China
Nkọwa:Ọkwọ ụgbọala na-adịghị ahụkebe High Bay Light,Ejiri Ngwunye Elu Bay Light,Ejiri ọkụ dị elu,Ejirila Aluminom dị elu,,
Home > Ngwaahịa > LED High Bay Light > Ọkwọ ụgbọala na-adịghị ahụkebe High Bay Light
Ngwaahịa nke Ọkwọ ụgbọala na-adịghị ahụkebe High Bay Light , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Ọkwọ ụgbọala na-adịghị ahụkebe High Bay Light , Ejiri Ngwunye Elu Bay Light suppliers / factory, wholesale high-quality products of Ejiri ọkụ dị elu R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
UFO LED Osimiri dị elu Light for Industrial  Kpọtụrụ ugbu a
Ọkwọ ụgbọala 150w LED High Bay Light  Kpọtụrụ ugbu a
60W Ịnwụ na-agbaghị agbazinye Highlight High Speed ​​Light  Kpọtụrụ ugbu a
Ụlọ ọrụ mmepụta ihe 200W LED Highlight Lighting  Kpọtụrụ ugbu a
50W 100W Mba Star LED High Bay Light  Kpọtụrụ ugbu a
Shenzhen UFO LED High Bay Light na Ụlọ  Kpọtụrụ ugbu a
150W Fin LED High Bay Light  Kpọtụrụ ugbu a
SMD3030 New Driverless LED High Bay Light  Kpọtụrụ ugbu a
50W Ọ dịghị Ọkwọ ụgbọala LED Elu Bay Light  Kpọtụrụ ugbu a
Ugo elu UFO di elu nke afọ abuo nke elu Bay Light  Kpọtụrụ ugbu a
Cheap 100W / 150W / 200W UFO LED High Bay Light  Kpọtụrụ ugbu a
12000lm 100W Ọhụụ na-adịghị agbazikwa agbazinye LED  Kpọtụrụ ugbu a
150W Ọhụụ na-adịghị agbazikwa agba ọkụ  Kpọtụrụ ugbu a
UFO LED Osimiri dị elu Light for Industrial
UFO LED Osimiri dị elu Light for Industrial Nke a 2019 a tọhapụrụ UFO LED Driverless High Bay Light ejighị ọkwọ ụgbọala ọ bụla, akwụkwọ ikike 3 afọ. Ikuku dissipation nke aluminom alloy keyplate achi achi na oriọna ndụ Ndobe na-eguzogide ọgwụ. Nke a...
Ọkwọ ụgbọala 150w LED High Bay Light
Ọkwọ ụgbọala 150w LED High Bay Light Nke a 2019 a tọhapụrụ UFO LED Driverless High Bay Light anaghị eji nkà na ụzụ, akwụkwọ ikike 3 afọ. Ikuku dissipation nke aluminom alloy keyplate achi achi na oriọna ndụ Ndobe na-eguzogide ọgwụ. Nke a bụ otu...
60W Ịnwụ na-agbaghị agbazinye Highlight High Speed ​​Light
Ọnụahịa otu: USD 36.87 / Piece/Pieces
Nkọwapụta ngwaahịa: 60W Ịnwụ na-agbaghị agbazinye Highlight High Speed ​​Light Nkọwapụta Ngwaahịa: Model NO. AD-GKD-60WDL Wattage 60W Voltage AC 85-305V, 50/60Hz Certificate CE, RoHs Beam Angle 30° 60° 90° 120° PC60° Power Factor...
Ụlọ ọrụ mmepụta ihe 200W LED Highlight Lighting
Ọnụahịa otu: USD 43.65 - 44.38 / Piece/Pieces
Nkwakọ ngwaahịa: 32 * 32 * 8cm / CTN 1pcs / CTN 2.24KG / CTN
Ụlọ ọrụ mmepụta ihe 200W LED Highlight Lighting Nkọwa: Ikanam UFO High Bay nwere oké ike ịzọpụta ike na a 5 afọ akwụkwọ ikike. Ozugbo amalite na O kpochapu ma na-emegharị ọnụ. Egwuregwu Green na Eco-friendly na-enweghị mercury. Enwere ike imezi...
50W 100W Mba Star LED High Bay Light
Ọnụahịa otu: USD 13.57 - 13.79 / Piece/Pieces
Nkwakọ ngwaahịa: 32 * 32 * 8cm / CTN 1pcs / CTN 1.2KG / CTN
50W 100W Mba Star LED High Bay Light Nkọwapụta S : Model NO. AD-UFO-50WDL-BZ
Shenzhen UFO LED High Bay Light na Ụlọ
Ọnụahịa otu: USD 79.7 / Piece/Pieces
Nkwakọ ngwaahịa: 36 * 36 * 22cm / CTN 1pcs / CTN 4.5KG / CTN
UFO di elu Lumen Industrial High Highlight Light Model NO. AD-UFO-150WD1
Ọnụahịa otu: USD 29.57 - 30.06 / Piece/Pieces
150W Ụdị Ụdị Ọkwọ ụgbọala na-adịghị ahụkebe High Bay Light 150W LED nke na-adịghị anya ụgbọala High Bay Light bụ oriọna mmepụta ihe ọhụrụ. Ọ na-eme ka ọkụ dị ọkụ, na-eme ka mmetụta mgbasa ọkụ dị mma. Ụfụ bụ ọlaọcha, dị mfe ma mara mma. Nke a ọkụ...
Ọnụahịa otu: USD 49.39 - 50.21 / Piece/Pieces
SMD3030 New Driverless LED High Bay Light 150W LED Elu Bay Light bụ ìhè ọkụ na-adịghị mberede, ọkwọ ụgbọala n'efu nke na-eri obere. Echegbula na nkà na ụzụ na-akwọ ụgbọala ga-eme ka ìhè Ọkụ na-ebelata. Ọ bụghị ịdị ndụ ebighị ebi. Nke a ikanam...
50W Ọ dịghị Ọkwọ ụgbọala LED Elu Bay Light
50W Ọ dịghị Ọkwọ ụgbọala LED Elu Bay Light 50W Onye na-adịghị ahụkebe LED High Bay Light bụ nke a tọhapụrụ ọhụrụ ma rere ezigbo ọkụ. E mere ya dị ka ihe ọkụ ọkụ dị ọkụ, okpomọkụ na-agbanyụ ngwa ngwa. Nke a na-acha ọkụ High Bay Light nakweere nkà na...
Ọnụahịa otu: USD 26.61 - 27.04 / Piece/Pieces
Ugo elu UFO di elu nke afọ abuo nke elu Bay Light Model NO. AD-GKD-100WDL-YY
Ọnụahịa otu: USD 30.78 - 31.3 / Piece/Pieces
Nkwakọ ngwaahịa: 28 * 28 * 20cm / CTN 1pcs / CTN 2.54KG / CTN
LED High Bay Light maka Ụlọ ọrụ na Ụlọ nkwakọba ihe Model NO. AD-UFO-100WDL-XC
12000lm 100W Ọhụụ na-adịghị agbazikwa agbazinye LED
Ọnụahịa otu: USD 46.09 / Piece/Pieces
12000lm 100W Ọhụụ na-adịghị agbazikwa agbazinye LED Nkọwapụta Model NO. AD-GKD-100WDL
150W Ọhụụ na-adịghị agbazikwa agba ọkụ
Ọnụahịa otu: USD 57.4 / Piece/Pieces
150W Ọhụụ na-adịghị agbazikwa agba ọkụ Nkọwapụta Model NO. AD-GKD-150WDL
China Ọkwọ ụgbọala na-adịghị ahụkebe High Bay Light Ngwa
Ọkwọ ụgbọala na-eburu ìhè dị elu
N'ebe a, ị nwere ike ịchọta ngwaahịa ndị yiri ya na Ọkwọ ụgbọala na-adịghị ahụkebe High Bay Light, anyị bụ ndị ọkachamara nke Ọkwọ ụgbọala na-adịghị ahụkebe High Bay Light,Ejiri Ngwunye Elu Bay Light,Ejiri ọkụ dị elu,Ejirila Aluminom dị elu,,. Anyị lekwasịrị anya n'ịzụlite ngwaahịa, mmepụta na ahịa. Anyị emeela ka ogo Ọkwọ ụgbọala na-adịghị ahụkebe High Bay Light dị mma iji hụ na ngwaahịa ọ bụla na-ebupụ ngwaahịa.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ngwaahịa ndị dị na Ọkwọ ụgbọala na-adịghị ahụkebe High Bay Light, biko pịa nkọwa ngwaahịa iji lee parameters, ụdị, foto, ọnụahịa na ozi ndị ọzọ gbasara Ọkwọ ụgbọala na-adịghị ahụkebe High Bay Light,Ejiri Ngwunye Elu Bay Light,Ejiri ọkụ dị elu,Ejirila Aluminom dị elu,,.
Ihe ọ bụla ị bụ otu ma ọ bụ onye ọ bụla, anyị ga-eme ike anyị niile iji nye gị ozi ziri ezi na nke zuru ezu gbasara Ọkwọ ụgbọala na-adịghị ahụkebe High Bay Light!
Ọkwọ ụgbọala na-adịghị ahụkebe High Bay Light Ejiri Ngwunye Elu Bay Light Ejiri ọkụ dị elu Ejirila Aluminom dị elu Ọkụ ụgbọala na-adịghị mma ụgbọala LED